Ifa Islaamaa – "Dhugumatti, Rabbiin Gooftaa kiyyaa fi Gooftaa keessani, kanaafu wanta hundaa caalaa Isa jaalladhaa, gadi jedhaaf, waan hundaa Isarraa kajeelaa, kadhaa, sagadaaf, Isaaf ajajamaa. Kanatu karaa qajeeladha."
"Dhugumatti, Rabbiin Gooftaa kiyyaa fi Gooftaa keessani, kanaafu wanta hundaa caalaa Isa jaalladhaa, gadi jedhaaf, waan hundaa Isarraa kajeelaa, kadhaa, sagadaaf, Isaaf ajajamaa. Kanatu karaa qajeeladha."
Beeksisni websaayiti kana irratti mul’atu kan ani itti maxxansee osoo hin ta’in WordPressitu itti maxxanse. Sababa websaayiti kana host godhaniif (keessumeessaniif) maallaqa argachuuf beeksisa (ad) itti maxxansu. Websaayiti beeksisa irraa bilisa ta’e daawwachuuf sammubani.com tuqaa.
Hiika Laa İlaah İllallah-kutaa 2
Posted on February 3, 2020 by sammubani
Laa ilaah illallah’n nama fayyaduuf sharxiwwan guuttamu qaban keessaa beekumsaa fi yaqiina jennee jirra. Namni waa’ee laa ilaah illallah yoo hin baratin, beekumsaa fi yaqiina argachuu danda’aa? Laa ilaah illallah rukni lama akka qabdu kutaa darbe keessatti ilaalle jirra: Nafiyy (dhabamsiisuu) fi isbaat (mirkaneessu)dha. Mee itti xinxalli, namni beekumsa malee kanniin lamaan beekun hojii irra oolchu danda’aa? Kanaafu, namni milkaa’uu fi azaaba jala nagaha bahuu barbaadu, sirriitti laa ilaah illallah beekuuf carraaqu qaba. Takkamaan hiika laa ilaah illallah sirritti hubachuu dhiisu dandeenya. Garuu akkuma barreefama dubbisnuu fi ibsaaf ragaa dabalataa ilaalluun sirritti hubachaa adeemna. Barreefamni kuni akka seensaati. Gara fuunduratti haala ajaa’ibaa fi salphaatin hiika laa ilaah illallah namni kamu hubachuu danda’uun akka dhiyeessinu ni abdanna. Kanaafu, nu waliin tura, nu hordofaa….
Itti haa fufnu…
Posted in Tawhiida	Tagged ibaada, ibaadaa, laa ilaah illallah, Tawhiida	Leave a comment
Hiika Laa İlaah İllallah-Kutaa 1
Posted on February 2, 2020 by sammubani
Akkuma yeroo darbe jenne hundeen Islaamaa Rabbii olta’aa tokkicha qofa gabbaruu fi wantoota Isaa gadi jiran hundatti mormuu fi gabbaruu irraa fagaachudha. Jecha biraatin, “Laa ilaah illallah” dha.
Posted in Tawhiida	1 Comment
Tafsiira Suuratu Al-Hadiid guutuu isaa buusuf liinki kana tuqaa: https://islaama.files.wordpress.com/2020/01/tafsiira-suuratu-al-hadiid-1.pdf
Posted in Qur'aana	Tagged Qur'aana, Tafsiira, Tafsiira Suuratu Al-Hadiid	Leave a comment
Islaamni Jireenya Guutuun Wal-Qabata-Kutaa-4
Posted on January 31, 2020 by sammubani
Hanga ammaatti Islaamni jireenya ilma namaa guutuun akka wal qabatu ilaalaa turreera. Fakkeenya kaasun Islaamni jireenya guutuun akka wal qabatu ilaalun keenya hiika “Laa ilaah illallah” haala salphaan akka hubannu nu gargaara. Ta’uu baannan, Islaama salaata, zakaa, sooma, hajjii fi kkf irratti yoo daangeessine, waa baay’ee dhabna. Islaamni jireenya guutuun akka wal qabatu fudhannee yoo itti bulle qofa gammachuu fi milkaa’inna barbaannu arganna. Har’as itti fufuun kutaa dhumaa haa ilaallu.
Itti Haa fufnuu
Posted in Tawhiida	Leave a comment
Islaamni Jireenya Guutuun Wal-qabata-Kutaa-3
Posted on January 30, 2020 by sammubani
Kutaa darbe keessatti hariiroo Islaamaa fi siyaasa, Islaamaa fi diinagdee jidduu jiruu fakkeenya muraasa kaasun ilaalle jirra. Har’as itti fufun Islaamaa fi hawaasummaa jidduu hariiroo jiru ni laalla. Kuni hubannoo nuti Islaamaaf qabnu akka bal’isu taasisa.
Posted on January 29, 2020 by sammubani
Islaamni jireenya ilma namaa guutuun akka wal qabatu ragaa agarsiisu fakkeenya muraasaan haa ilaallu:
Posted on January 28, 2020 by sammubani
Kutaa darbe keessatti Islaamni karaa tokkicha qajeelaa gammachuu fi milkaa’innaatti nama geessu jennee jirra. Karaan qajeelaan kuni dhimma dhuunfaa irraa kaasee hanga mootummaa gahutti seeraa fi qajeelcha of danda’e kan qabuudha. Karaan qajeelaan kuni nama tokko ykn saba tokkoof qofa osoo hin ta’in hawaasa addunyaa guutuuf kan ta’uudha. Garuu namoonni baay’een waa’ee Islaamaa ilaalchise yaada dogongora sammuu keessatti waan biqilchaniif Islaamni karaa qajeelaa tokkicha gammachuutti isaan geessu ta’uu hin argine. Mee yaada dogongoraa kana haa ilaallu:
Posted on January 26, 2020 by sammubani
Posted in Tawhiida	Tagged Islaama, Islaama jechuun maal jechuudha?	Leave a comment
Posted on January 25, 2020 by sammubani
Posted on January 24, 2020 by sammubani